Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Viking dia mandray ny sambon'ny ranomasina mankany Los Angeles sambany
Los Angeles no seranan-tsambon'i Etazonia West Coast voalohany tany Viking tamin'ny tantaran'ny orinasa 20 taona.
Viking androany dia nandray ny sambon-dranomasina fahefatra sy vaovao, Viking Sun ho any Los Angeles, izay tranon'ny foiben-toeran'ny orinasa amerikana ihany koa. Ny sambo dia eo am-pitetezana ny Viking's World Cruise izay efa lafo vidy 141 andro avy any Miami ka hatrany London, ary Los Angeles no seranan-tsambon'i Etazonia Andrefana Andrefana voalohany any Viking tamin'ny tantaran'ny orinasa 20 taona. Niarahaba ny vahiny tao amin'ny Viking Sun ny filohan'ny Viking Torstein Hagen androany, ary nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety dia namoaka fanentanana dokambarotra marobe fantsona maro mitondra ny lohateny hoe: “Fantatrao ve?”
"Orinasa mpandehandeha izahay hatrizay izay mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fanitrihana ara-kolontsaina," hoy i Torstein Hagen, filohan'ny Viking. “Tao anatin'izay roapolo taona farany izay dia nitarika ny indostria hanao sambo fitsangantsanganana an-dranomasina izahay, ary rehefa lasa làlana fitsangantsanganana an-dranomasina sambo kely voalohany izahay dia manana fotoana ahafahana mampahafantatra mpitsangatsangana vaovao ny fomba fikarohana Viking. Ilay vaovao 'Fantatrao ve?' ny fampielezan-kevitra dia kendrena hanentanana ny olona izay mety mbola tsy mahalala hoe inona no mampiavaka antsika amin'ny sehatry ny indostria, maninona isika no mpizahatany mpitsangantsangana be indrindra ary ahoana no fomba hanomezana lanja mihoatra ny orinasa mpitsangantsangana hafa. ”
Nanomboka tamin'ny “Wave Season” an'ny indostrian'ny fitsangantsanganana tamin'ny volana Janoary, ny fanombohana ny vaovaon'i Viking “Fantatrao ve?” ny fanentanana dia hanisy doka famoronana vaovao izay hiseho manerana ny fantsom-barotra rehetra, ao anatin'izany ny fahitalavitra, pirinty ary nomerika.
Natao ho an'ireo mpitsangatsangana sy mpihaino kendren'ny orinasa mpizahatany efa za-draharaha 55 taona no ho miakatra, manasongadina ireo mpanavakavaka ny indostrian'ny Viking, ao anatin'izany ny lanjan'izy ireo miaraka amin'ny fitsangatsanganana amoron-tsiraka tafiditra ao amin'ny seranana rehetra, ary koa ny tsy an'i Viking - tsy misy alina ara-dalàna, tsy misy ankizy ary tsy misy trano filokana. Ity fampielezana ity dia hizara ny tantaran'i Viking nahazo loka ihany koa, toy ny nomena ny anarana hoe # 1 Ocean Cruise Line amin'ny Travel + Leisure's 2016 sy 2017 World Best Awards ary ny # 1 River Cruise Line ao amin'ny mari-pankasitrahan'ny mpamaky Condé Nast Traveler.
Tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety dia nanambara ihany koa i Hagen fa ny sambo fahenina an'ny orinasa dia hatao hoe Viking Jupiter. Voalahatra fa hanomboka amin'ny volana febroary 2019, ny sambo rahavavy misy mpitsidika 930 dia handefa ireo dia lavitra malaza indrindra nataon'i Viking any avaratr'i Eropa sy ny mediteraneana, ary koa ny zana-tohatra vaovao roa any Amerika atsimo - Southern Atlantic Crossing (22 andro; Barcelona - Buenos Aires) ary South America & the Shili Fjords (18 andro; Buenos Aires - Santiago).